समाचार - ईन्जिन भल्भ घण्टीको कारण के हो?
भल्भ आवाज के हो?
गाडी सुरु भएपछि, ईन्जिनले धातु ढक्ढोर आवाजको समान लयबद्ध "क्लिक" बनाउँदछ, जुन इन्जिनको गति बृद्धि भई तालमा द्रुत हुन्छ। सामान्य अवस्थामा, ईन्जिनले लामो समयको लागि यस्तो प्रकारको हल्ला गर्दैन। धेरैजसो आवाज थोरै समयको लागि चिसो सुरु भएपछि गरिन्छ र त्यसपछि बिस्तारै हराउँछ। यो भल्भ आवाज हो।
भल्भ बज्नुको कारण के हो?
भल्भ रिंगि .को मुख्य कारण यस बीचको क्लियरन्स बनाइएको हो ईन्जिन भल्भ संयन्त्रहरू, जस मध्ये अधिकांश भागहरू लगाउने वा क्लीयरन्स समायोजन विफलताहरू जस्तै क्यामशाफ्ट्स, रकर हतियारहरू, र हाइड्रोलिक ज्याकको कारणले हो।
धेरै जसो इञ्जिनहरूले हाइड्रोलिक ज्याक प्रयोग गर्दछन्, जुन मुख्य रूपमा भल्भ मेकानिजमको पोसाकको कारण हुने खाईलाई स्वचालित रूपमा समायोजन गर्न प्रयोग गरिन्छ। हाइड्रोलिक ज्याकको स्वचालित समायोजन तेलको दबावले महसुस गर्छ। जब पार्ट्स अत्यधिक थकित हुन्छन् र स्वचालित समायोजनको सीमा भन्दा बढी हुन्छ, भल्भ आवाज हुनेछ। हाइड्रोलिक ज्याक स्तम्भको विफलता र स्वचालित समायोजन प्रकार्यको असफलताले भल्भलाई पनि आवाज दिन सक्छ।
अत्यधिक भल्भ क्लीयरन्स, सुरु हुदा आवाजको बाहेक (कार चिसो भएको खण्डमा अधिक स्पष्ट), त्यहाँ अन्य कमिहरू छन्। जस्तै: अपर्याप्त भल्भ लिफ्ट, अपर्याप्त सेवन, अपूर्ण निकास, कम ईन्जिन पावर, र उच्च ईन्धन खपत।
जस्तो कि प्रत्येक गाडीको प्रकार फरक हुन्छ, भल्भ निकासी आवश्यकताहरू पनि फरक हुन्छन्। सामान्यतया, सेवन भल्भको सामान्य निकासी १ 15-२० तारको बीच हुन्छ, र निकास भल्भको सामान्य निकासी २-3--35 तार बीच हुन्छ।
भल्भ आवाज र इन्जिन तेल बीच के सम्बन्ध छ?
हाइड्रोलिक ज्याकको स्वत: क्लीयरन्स समायोजन समारोह तेलको चापले महसुस गरेकोले, भल्भ ध्वनिको तेलसँग सीधा सम्बन्ध छ। अवश्य पनि, आधार यो हो कि ईन्जिन लगाइएको छैन।
१. कम तेलको चाप वा अपर्याप्त तेल मात्रा
कम तेलको चाप, भल्भ चेम्बरको अपर्याप्त चिकनाई; वा अपर्याप्त तेल, र हाइड्रोलिक ज्याकमा खाली ठाउँहरू जब वायु तेलको परिच्छेदमा प्रवेश गर्दछ, भल्भ आवाज उत्पन्न गर्दछ।
२. मर्मतको बखत वायु तेलको अंशमा प्रवेश गर्दछ
धेरै मानिससँग यस प्रकारको अनुभव हुन्छ। तिनीहरूले भर्खरै मर्मत समाप्त गरे, र त्यहाँ एक छोटो अवधि का भल्भ आवाज थियो जब इग्निशन अर्को दिन थियो। वास्तवमा, यो अवस्था अपेक्षाकृत सामान्य हो, किनकि तेल बगैंचामा तेल निकाल्ने क्रममा, तेल खण्डमा रहेको तेल खाली हुन्छ, र हावाले तेल खण्डमा प्रवेश गर्न सक्दछ र वाल्भ आवाज उत्पन्न गर्दछ। अपरेशनको अवधि पछि, हवा डिस्चार्ज हुनेछ र भल्भको आवाज हराउनेछ।
More.इन्जिनमा बढी कार्बन निक्षेप
इन्जिन एक अवधि को लागी प्रयोग गरिए पछि, कार्बन निक्षेपहरू भित्र हुनेछन्। जब कार्बन निक्षेपहरू कुनै निश्चित तहमा जम्मा हुन्छन्, तेल खण्डहरू अवरुद्ध हुन सक्छ, हाइड्रोलिक ज्याकको स्वचालित खाल समायोजन समारोह विफल हुन र वाल्भ आवाजको कारण।
कसरी भल्भ आवाजबाट बच्न?
भल्भ रिंगि Avo बेवास्ता गर्न वास्तवमा धेरै सरल छ। कार मालिकले केवल ईन्जिन लगाउने रोक्नको लागि निर्माताको आवश्यकताहरूको अनुरूप समयमै मर्मत गर्नु आवश्यक छ, जसले यस अवस्थाको घटनालाई प्रभावकारी रूपमा कम गर्न सक्छ। इन्जिनको तेल छनौट गर्न पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ जुन तपाईंको कारको इञ्जिन ग्रेड र चिसोपनका लागि उपयुक्त छ, र अन्धाधुन्ध रूपमा उच्च-अन्त र कम-चिपचिप ईन्जिन तेलको अनुसरण नगर्नुहोस्।